ကလူရာတှငျမဝံ့မရဲသို့မဟုတ်အဖြစ်ကမျြးစာကိုတံဆိပ်ကပ်တဲ့အခါမှာဒါဟာအမြဲငါ့ကိုအံ့သြ Anti-လိင် ။ အားလုံးပြီးနောက်, ကမျြးစောငျဖို့ command ကိုအောက်မှာဥယျာဉ်တော်၌အသကျရှငျနှစျခုအဝတ်အချည်းစည်းလူတို့နှင့်အတူထွက် start "အသီးအနှံများဖြစ်များပြား။ " အာဗြဟံသည်မိမိမယားကိုစာရာနှင့်အတူကလေးတစ်ဦးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသည်သူ၏အကြီးတန်းနှစ်ကအများစုနေခဲ့ရသည်။ ကမျြးစာကိုအဲဒီနှစျ "။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အဘို့ချစ်တော်မူသောအထံတော်သို့သာလျှင်ရက်အနည်းငယ်နဲ့တူသလိုပဲ" ဟုပြော - ထိုအခါနောက်ပိုင်းမှာ, ယာကုပ်သူရာခေလသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့အပူတပြင်းခဲ့ရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထက်ပိုမို 14 နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်
ကျနော့်အမြင်တွင်, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌အစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားယခုအချိန်တွင်လည်းရှောလမုန်၏သီချင်းအဖြစ်လူသိများ Songs ရဲ့သီချင်း၏သတ္တမမျြးအခနျးကွီး, ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရဲ့တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းကွညျ့ကွစို့:
2 သင်၏ခါးတစ် rounded ပန်းကန်ဖြစ်၏
သီချင်းများ7သီချင်း: 1-3
ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမြင်ကြသည်မဟုတ်လော ဤကျမ်းပိုဒ်၌, ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်သူ၏သစ်ကိုသတို့သမီးအားချီးမွမ်းသည်။ သူ၏စကားအခန်း5ရှိသူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်သူ့ကိုသူမရဲ့ပီပီချီးမွမ်းရန်တုန့်ပြန်ကြသည်။
ရှောလမုန်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို၏ရငျးနှီးသတိပြုပါ။ သူကသူမ၏ပေါင်, သူမ၏ခါး, သူမ၏ခါးနှင့်သူမ၏ရင်သားဖော်ပြထားတယ်။ ထိုမင်းသည်ကိုယ့်ကိုတက်နွေးတဲ့ခံခဲ့ရသည်!
ဗာသ rabbim ၏တံခါးဖြင့်။
ခရမ်းရောင် cloth- ကဲ့သို့သင်တို့အဆံ
ရှငျဘုရငျကိုသငျ့ရဲ့ tresses အတွက်သုံ့ပန်းကျင်းပနိုငျသညျ။
8 ငါစွန်ပလွံပင်ကိုတက်ပါလိမ့်မယ် "ဟုပြောသည်
နှင့် apricots ကဲ့သို့သင်တို့အသက်တော်၏အမွှေးအကြိုင်။
သီချင်းများ7သီချင်း: 4-8
ရှောလမုန်သည်ကျမ်းပိုဒ် 7-8 အတွက်ဂီယာ switches ။ အသီးပြွတ်စွန်ပလွံပင်များနှင့်သူမ၏ရင်သားမှသူမ၏အရပ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်သူ says: "ငါစွန်ပလွံပင်ကိုတက်နှင့်၎င်း၏အသီးကိုကိုင်ယူပါလိမ့်မယ်။ " သူကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကြေညာသည်။ သူကသူ့သတို့သမီးကိုနဲ့မေတ္တာစေလိုသည်။
9 သင့်ရဲ့ပါးစပ်ဒဏ်ငွေ wine- ကဲ့သို့ဖြစ်၏
ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်း W က,
သီချင်းများ7သီချင်း: 9-10
ရှောလမုန်သည်ကျမ်းပိုဒ်9ရဲ့အစမှာစကားပြောတဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ထို့နောက်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ သူ၏ဇနီး interrupts ရှိရာအဆိုပါ "W" သူ၏ဝါကျပြီးပါကနှင့်သူ၏အလိုဆန္ဒဘုရားရဲ့, ဖော်ပြသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးစပျစ်ရည်ကိုအတိတ်နှုတ်ခမ်းနှင့်သွားများနဲ့တူစီးဆင်းအတူတကွလာမယ့်ပါးစပ်အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏လုပ်ရပ်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းငယ် 11 နှင့်အတူစတင်ခြင်း, သတို့သမီးမေတ္တာတော်ကိုအောင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကိုမျှဝေ:
ရဲ့လယ်ပြင်သို့ သွား. ကြကုန်အံ့,
13 အနုဆေးသီး, တစ်ဦးအမွှေးအကြိုင်ကိုချွတ်ပေး
နှင့်ငါတို့တံခါးနားမှာရှိသမျှသော delicacy- ဖြစ်ပါသည်
သီချင်းများ7သီချင်း: 11-13
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ပါရှိသောအဆိုပါပုံရိပ်သိမ်မွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါချစ်သူများဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော blooming ဖြစ်ကြောင်းပန်းပွင့်နှင့်အပွင့်တို့တွင်ညဥ့်ဖြုန်းနေကြတယ်။ သတို့သမီးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနီရသောအခါမှည့်သော, နှင့်ရှေးခေတ်ကမ်ဘာပျေါတှငျအပြင်းထန်ဆုံး aphrodisiac စဉ်းစားခဲ့ကြရာအနုဆေးသီးလောက်သောသလဲသီးခန့်သီဆို။
တူညီသောစိတ်ကူးများတိုင်းခဲဖွယ်စားဖွယ်ဖို့ "ငါတို့တံခါး" ဖွင့်ပွဲ၏ပုံထဲမှာသယ်ဆောင်နေကြသည်။ ဤသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်၏တညဉ့်သည်။
ဒါဟာအတူတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံမဟုတ်ပါဘူးနားလည်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ပြီးသားအခနျးကွီး4မှာသူတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုမြင်ရပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်ဤဘုရားကိုရည်ရွယ်လမျး၌စျြခွငျးမတ်ေတာအောင်လက်ထပ်လူမျိုး၏ပုံဖြစ်ပါသည် - တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖိုးထားများနှင့်နည်းလမ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခံစား "အသစ်ကအဖြစ်ဟောင်းကို။ "
အင်္ဂလိပ် Standard Version
မောရှေနှင့် Burning ဘုရှ် - ကျမ်းစာပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်
ပျောက်သောသားပုံပြင် - လုကာ 15: 11-32
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Clement VI ကို
အထွေထွေအမေရိကန်အင်္ဂလိပ် (accents နှင့်စကား)
တစ်ဦး Talent Agency ကတစ်ဖုံးပေးစာရေးသား
စိန့် Bonaventure တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
1810 ကနေ 1820 မှ timeline
တစ်ဦး Bracha နားလည်ခြင်းမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
PHP ကိုများအတွက် TextEdit အသုံးပြုခြင်း
တစ်ဦး Belly Putter ဆိုတာဘာလဲ
အနုပညာအတွက် 10 အကြိုက်ဆုံးမိခင်များ
CONNELL - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
သင့်ရဲ့မျက်လုံးသက်သာစေသည်နှင့်အ Eyestrain သက်သာရာလုပ်နည်း
အမေရိကားရဲ့4အကြိုက်ဆုံးပါဝါ Chainsaws
ဂရိတ်ဖြူရေယာဉ်စု: သင်္ဘော USS ဗာဂျီးနီးယား (BB-13)
ဂျပန် Nigiyaka ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
လျှာကို Twisters - ခွေးလှေးနှင့်တစ်ဦး Fly
ချားလ်စ် Tex Watson ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို - အပိုင်းတစ်ခုမှာ